कोरोनाकै कारण बैठकमा गइनँ, पार्टी एकताप्रति मेरो विमति छैनः राजकिशोर यादव - KhabarKhurak
> कोरोनाकै कारण बैठकमा गइनँ, पार्टी एकताप्रति मेरो विमति छैनः राजकिशोर यादव
१३ बैशाख २०७७, शनिबार १०:०१
काठमाडौं, १३ बैशाख । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपालको एकता बैठकमा दुईजना प्रभावशाली नेताहरू राजकिशोर यादव र अनिल झा गएनन्। दुवैजना नेता राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य हुन्।
ऐतिहासिक पार्टी एकताको महत्वपूर्ण क्षणमा किन गएनन् त उनीहरू? नजानुको कारण के थियो? कि पार्टी एकताप्रति असन्तुष्ट थिए? उनीहरूको अनुपस्थितिले यी प्रश्न उब्जिएका छन्।
आखिर, राजपा–समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकता भयो। सरकारले पनि चर्को आलोचना र औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि शुक्रबार राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लियो।
शंका गर्नेको बुद्धि छैन भन्छु म। उसले जानेको छैन कि राजपा कसरी बन्यो? किन बन्यो? राजपाको इतिहास नजान्ने मान्छेले हल्ला गरेको हो। वाहियत हो। बिल्कुलै गलत छ।
पछिल्ला राजनीतिक परिदृश्य, राजपा–समाजवादी पार्टी एकता, एकताप्रतिको धारणालगायत विषयमा तत्कालीन राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका एकजना सदस्य राजकिशोर यादवसँग नेपालन्युजकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं त तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्ष मण्डलको सदस्य। तर, समाजवादी पार्टी नेपालसँगको एकता बैठकमा देखिनु भएन नि?
मलाई त अचम्म लाग्छ। एक महिनादेखि मुलुक लकडाउनमा छ। कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महाविपत्तिबाट आक्रान्त छैन र संसार? कतिपय जनताको खाना नपाएर बिजोक छ। मानिसहरूमा संक्रमण फैलिएको फैलिएकै छ। मानव सभ्यताको लागि कोरोना भाइरस संक्रमण चुनौती बनेको छ।
सरकारले लकडाउनमा बसौं, कोरोनाबाट बचौं भनिरहेको छ। सामाजिक दूरी कायम गरौं भन्दैछ। म पूर्ण रूपले लकडाउनको पालनामा छु। बडो अनुशासित भएर। घरमा बसेर स्वअध्ययन गर्दैछु। आत्म चिन्तन र ध्यान गर्दैछु।
अब, किन राजपा र समाजवादी पार्टी नेपालबीचको एकता बैठकमा तपाई देखिनु भएन भनेर सोधिन्छ। यसमा मैले के जवाफ दिने र मैले?
के उसो भए तपाई राजपा-समाजवादी पार्टीको एकताप्रति समर्थन जनाउनुहुन्छ त?
तपाई प्रष्ट हुनुहोस् कि, पार्टी एकताप्रति मेरो कुनै विमति छैन। समर्थन छ। जे भयो ठीक भयो। ठीक छ। तर, अहिले यत्रो महाविपद्को बेला एकता बैठकमा गएर भिडभाड गर्नुपर्ने र नाच गर्नुपर्ने आवश्यकता त म केही देख्दिनँ।
म त एक महिनादेखि घरको गेटदेखि बाहिर पटक्कै निस्केको छैन। त्यसैले एकता बैठकमा किन गएन भन्नुभएन नि! टेलिफोन कुराकानी भयो साथीहरूसँग। पार्टी एकताको सवालमा। र, बुझ्नुपर्छ कि राजकिशोर यादव असन्तुष्ट भएको भए दुई पार्टीबीच एकता सम्भव हुन्थ्यो होला? हुने थिएन नि।
अब पार्टीको एकता प्रक्रिया बाँकी नै छ। एकताको सहमति मात्रै भएको छ। त्यसको बारेमा विस्तृत कुराकानी भएको छैन। सामान्यतः साथीहरूसँग फोनमै कुरा भइरहेको छ।
तर, दुई महत्वपूर्ण नेता पार्टी एकताको ऐतिहासिक क्षणमा सहभागी नहुनु त अर्थपूर्ण छ भनेर टीकाटिप्पणी भयो नि?
गलत। पूरै गलत। म भन्छु कि, कोरोनाको कारण अलिक संयमित होऔं। अनुशासित होऔं भन्ने मेरो राय हो क्या। तपाई सोच्नुहोस् कि जीवन सबैभन्दा ठूलो कुरो होइन र? आफू पनि समस्यामा पर्ने र अरूलाई पनि समस्यामा पार्ने त गर्नु भएन नि।
नेताहरू कस्ता देखिए भने अरूका लागि कानुन बनाउने आफू नमान्ने। लकडाउनको पालना नेताहरूले गर्नु पर्दैन? जनताले मात्रै गर्नु पर्छ र? भाइरसले त चिन्दैन नि नेता हो कि को हो भनेर।
संक्रमण त सबैलाई हुन्छ नि होइन? त्यहाँ जाँदा ड्राइभर हुन्छ, पिएसओ हुन्छ, हिँड्नु पर्ने हुन्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको त ‘मेन्टेन’ हुँदैन त्यहाँ।
त्यसकारण, म पार्टी एकताको बैठकमा नगएको हुँ। त्यो साँचो हो। तर, त्यस्तो कुनै बिमति र असन्तोष भएर होइन। लकडाउनमा बस्ने नियमित प्रक्रिया भएको छ, त्यही भएर हो।
तपाईँको पार्टी एकताप्रति विमति छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ?
हुन्छ। त्यस्तो केही छैन। जान नपाएको कोरोनाकै कारणले गर्दा हो। हुनत यो सबै राजनीतिक गतिविधि कोरोना संक्रमणको बेला ठप्प हुनुपथ्र्यो। लकडाउनको त बर्खिलाफ भयो।
पूरै आर्थिक गतिविधि बन्द छ। यस्ता गतिविधि गर्ने हो अहिले? म त अचम्म लाग्छ।
कतिपयले त पार्टी एकताको बैठकमा तत्कालीन राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलको सदस्यहरू तपाईँ राजकिशोर यादव र अनिल झा नआउनुलाई पार्टी विभाजनसँग जोडेर शंका त पनि गरे नि?
तपाईंलाई मैले भने नि। शंका गर्नेको बुद्धि छैन भन्छु म। उसले जानेको छैन कि राजपा कसरी बन्यो? किन बन्यो? राजपाको इतिहास नजान्ने मान्छेले हल्ला गरेको हो। वाहियत हो। बिल्कुलै गलत छ।
नेपालन्युजबाट लिइएकाे ।